Ibhulogi yami ingcono kune-99.86% yawo wonke amanye amabhulogi! | Martech Zone
Ibhulogi yami ingcono kune-99.86% yawo wonke amanye amabhulogi!
NgeSonto, Septhemba 3, 2006 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngifunde okukhulu iposi kusuka ku-blog osebenza naye omusha namuhla ku-Blog Burnout. Kwangenza ngazibuza ukuthi ngabe zonke lezi zinto zokubhuloga zingithathaphi. Hhayi ukuthi ngicabanga ukuqeda ukubhuloga kwami, akukho thuba lalokho! Ngiyayithanda kakhulu (futhi ngiqonde kakhulu!). Ngeshwa, ngingahle noma ngingalunge kangako - kuya ngokuthi uyibuka kanjani. Ngakho-ke angikwazi ukuyeka umsebenzi wami wosuku okwamanje (futhi angifuni ngempela ukukwenza lokho, noma).
ITechnorati ifaka ibhulogi yami kunombolo 74,061. Unalokho engqondweni, ngicabanga ukuthi umbuzo ukuthi kuhle kangakanani ngokwanele? Angingabazi neze ukuthi noma ngubani osengqondweni yakhe ubheke iTechnorati futhi wazibuza… Kazi ubani osezingeni eliphezulu lama-75,000?
Nginezixhumanisi ezingama-67 ezivela kuma-blogs angama-37. Ngakho-ke, emhlabeni onamabhulogi angama-52,900,000, ama-blogger angama-37 athole ulwazi lwami lubaluleke ngokwanele ukuxhumanisa nami! Lokho kucishe kucindezele!
Kwi-Influence and Automation kubalwa ama-74,061 wama-blogs angama-52,900,000!
Ngakolunye uhlangothi, ngibe nokuthunyelwe okungama-200 kuphela kubhulogi lami. Seth Godin vele ushaye okuthunyelwe okungu-1,000. Mhlawumbe kunethuba lokuthi ngemuva kokuthunyelwe okungaphezulu kuka-800 engingaziletha kuTop 100 kaTechnorati. (Impela… futhi ngiyobe sengishicilele izincwadi ezi-5 ngaleso sikhathi, nami!)
Lokhu konke kungazwakala kukubi, kepha akunjalo. Ake sibeke i-spin ehlukile kuso. Ezweni elinamabhulogi angama-52,900,000, ukukalwa ku-74,061 akukubi kakhulu! Heck, okuku-0.14% ephezulu yawo wonke amabhulogi.
Ngakho-ke unayo. Ibhulogi yami ingcono kune-99.86% yawo wonke amanye amabhulogi! 😛
Ukuhlala esihlokweni kubhulogi yakho? Sebenzisa ifu lakho lomaki ukuze ubone
Ngezinye izikhathi ngiyazihlekisa!
Sep 3, 2006 ngo-5: 02 PM
… Yenza lezo zixhumanisi ezingama-68: o)
Kuhlala kunzima ukulinganisa impumelelo. Ngabe i- "Jurassic Park" iyifilimu engcono kunokuthi, “ISyriana”?
Sep 3, 2006 ngo-7: 37 PM
Ingxenye yempi emazingeni ebhulogi ukuxhumana nokuthola i-niche yakho, futhi uma usunezinto ezimbili phansi, khona-ke izinto ziqala ukusheshisela wena, ikakhulukazi kwaTechnorati.
Ngizama ukuqhekeza iklabhu leTechnorati 50K uqobo.
Sep 5, 2006 ngo-12: 28 PM
Isikhundla esihle osithole lapho i-doug, ngiku-90, uhla lwe-xxx ngokwami, akukubi ngebhulogi entsha uma ngisho kanjalo nami 🙂
Ngilinganisa impumelelo yamabhulogi ngabafundi, namazwana abo. Abafundi abahle njengoYvonne, Rico nabanye benza ibhulogi indawo enobungane futhi bayinikeze umoya omuhle. Ngibhuloga ngoba ngifuna, izinga le-technorai limane nje lihle ngokwengeziwe.
Feb 1, 2007 ngo-1: 10 PM
Lokho kwakushiwo kahle. Yazisa njalo imibono yakho ye-indepth. Qhubeka nomsebenzi omuhle!